फेरि माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले सबैलाई पुग्निगरी ३० कित्ता असार ३१ गतेबाट निष्काशन | DNFMEDIA
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाए संगै असार ३१ गतेबाट निष्काशन गर्न लागेको छ। बैंकले ‘१० बर्ष ,८.५ % माछापुच्छ्रे डिबेंचर २०८७’ नामक ऋणपत्र निष्काशन गर्न अनुमति प्राप्त भएको हो।
बैंकले प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँको दरमा ३० लाख कित्ताको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति असार १६ पाएको छ ।
सो ऋणपत्रहरु मध्ये बैंकले १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि र १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्नेछ। यस बैंकको उक्त ऋणपत्रमा बिक्री प्रबन्धक तथा निष्कासनको काम नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले गर्नेछ । बैंकले १० वर्ष अवधिको ८.५०% व्याजदर भएको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो ।
यो बैंकको ऋणपत्र असार ३१ गते आइतबारबाट निष्कासन गरिने छिटोमा साउन ४ गते र ढिलोमा साउन १७ गतेसम्मसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।उक्त ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सिआश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
Previous: बिहीबारदेखि युनियन लाइफको साधारण सेयर बिक्री खुल्ला, कति दिन पाइन्छ आवेदन ?
Next: कहिले हुँदैछ मैलुङखोला जलविद्युतको आइपीओ निष्कासन ? जान्नुहोस